mishiino Engineering guga - Shiinaha Shandong Qingyun Machine
Riixo Springs - Cylindrical Hot Springs Roll riixo Large
mishiino Engineering guga
guga Large - kulul guga coil spring culus
Aarayo guga-jiido guga-cylindrical guga waaweyn
Tower toobinta guga guga
Riixo Springs - Cylindrical Hot Roll com ...
1. sida ay sifooyinka kala duwan ee load shaqada, ilo helical loo qaybin karaa saddex nooc: riixo, xiisadda iyo torsion. 2. sida ay sifooyinka dhismaha, waxa loo qaybin karaa laba qaybood: guga helical cylindrical iyo dhexroor variable guga helical. 3. sida ay sifooyinka qaabka ay, waxaa loo qaybin karaa toobinta, kitaabkii duudduubnaa, concave iyo qaababka convex. 4. in wax soo saarka iyo isticmaalka, guga muquuninta ayaa sidoo kale waxaa lagu kala qaybiyey laba nooc kartaa: spi weyn ...
1. sida ay sifooyinka kala duwan ee load shaqada, ilo helical loo qaybin karaa saddex nooc: riixo, xiisadda iyo torsion.
2. sida ay sifooyinka dhismaha, waxa loo qaybin karaa laba qaybood: guga helical cylindrical iyo dhexroor variable guga helical.
3. sida ay sifooyinka qaabka ay, waxaa loo qaybin karaa toobinta, kitaabkii duudduubnaa, concave iyo qaababka convex.
4. in wax soo saarka iyo isticmaalka, guga muquuninta ayaa sidoo kale waxa loo qaybin karaa laba nooc: guga muquuninta waaweyn iyo guga yar muquuninta sida uu habka sameynta iyo dhexroor ah waxyaabaha la. hore waxaa inta badan kulul la xirrira, oo dambe uu yahay mid qabow la xirrira.
5. kala saaro kale
Nooca guga muquuninta ka badan yahay, waxaana loo kala qaybin karaa sida ay tahay nooca dibadda.
cylindrical caadiga guga helical;
dhexroor variable guga helical.
Sida laga soo xigtay jihada of line muquuninta ah, waxa loo qaybin karaa:
guga A-dhiibay midig.
dhexroor variable ilihii helical kala qaybsan yihiin ilo toobinta helical, ilo gariiradda aarayo, iyo ilo helical concave.
ilo helical Cylindrical waa fudud in qaab-dhismeedka, ay fududahay in la sameeyo iyo loo. Its line sifo waxaa line toos ah, waxa loo isticmaali karaa sida guga riixo, iskala guga iyo torsion guga. Marka load ee waa weyn iyo baaxadda radial waa xadidan tahay, laba ilo kala duwan riixo dhexroor la wada isticmaali karaa si ay u sameeyaan guga la xoojiyey.
Previous: Riixo Springs - Cylindrical Hot Springs Roll riixo Large
Beeraha Makiinado Spring
Beeraha Makiinado Springs
Baasaboorka Fiber Plate
Suxuunta baasaboorka Fiber
Baaba'aysa Cuntada Container
Blue xeedho Plate
baaldi wiishka Belt
Saxaarad adeegaya dhoobada
Chain xoqo Conveyor
Wedding Cheap Glass xeedho Suxuunta
Dhuxul Mill Spring
Dhuxul Mine Makiinado Spring
Coke foornada Spring
Dhismaha Makiinado Springs
Conveyor Belt Waayo, Dhismaha
Custom riixo Spring
Cylindrical gariiradda Spring
Cylindrical Helical riixo Spring
Degradable Plate Casho Dabiiciga ah
Machine Casho Making Plate
Plate Casho Iyadoo FDA Certificate
la tuuro Paper Saxanka cuntada
Eco Friendly Mikrada Bio Plate
Engineering Makiinado Spring
xardhan Plate Casho
Oo dhaca Sand Machine Spring
Glass Casho Plate
Suxuunta Glass Wedding xeedho
Cycle Gold Blue xeedho Plate
Xeedho Plate Gold
Chain Cycle Golden xeedho Plate
Cycle Golden White xeedho Plate
Hot gariiradda Spring
Marmar Qoyska adeegaya saxaarad
Industrial foornada saxaarad Ceramic
Marmar adeegaya saxaarad
Marmar adeegaya qeybiye saxaarad
Birta Box Pill
Mikrada Bio Plate
Macdanta Conveyor Belt Waayo Sale
Macdanta Makiinado Spring
Macdanta Makiinado Springs
In la sameeyo Chain New xeedho Plate
Oil Makiinado Spring
Box Pill Small
Qasabkii adeegaya saxaarad
Tarooli Conveyor Chain
Suxuunta xeedho gaar ah
Saxaarad Ceramic White Waayo, Restaurant
White xeedho Plate
Z Nooca baaldi wiishka
Tolidda cover ilaaliya, dustproof nooca jiinyeer ...
cover difaaca ee fur dhululubo, dhululubo c ...
Dezhou Qingyun County Xinhualu, Gobolka Shandong, park hormood Shiinaha-gaarka ah